Ama-ulcers of the esophagus ayinxeba phezu kwodonga lensimbi. Ngokuvamile, lesi sifo senziwa kubantu abangaphezu kweminyaka engama-40 ubudala, kodwa kwezinye izimo, ukubonakala kwe-foci kuphawulwe futhi kusebancane, kaningi kumadoda.
Ezimweni ezingavunyelwe, isilonda sesisu, izimpawu kanye nokwelashwa okufundiswa kakhulu odokotela, kutholakala kalula kwezokwelapha.
Indawo yangakini kanye nezinhlobo zesifo
Njengomthetho, izilonda zakhiwa engxenyeni engezansi yendawo . Lesi sifo singaba nzima futhi singapheli. Ngaphezu kwalokho, izilonda zingabodwa (peptic) noma eziningi. Ngokuvamile, izici ezithinta ukubonakala kwazo ziyizinkinga ngesisu nesisu se-digestive - sokugaya singena emgodleni, okwenza ukuba kube khona umonakalo embranini emangcwabeni.
Izici eziningi zingabangelwa ukuthuthukiswa kwesifo njengesilonda sesisu. Izimbangela zesifo zihlukile:
Izinkinga emva kokuhlinzwa;
Ukwanda kwe-peristalsis yezidumbu zesisu;
I-asidi ephezulu yejusi esiswini;
Imikhuba emibi (ukuphuza ngokweqile nokubhema);
Ukwehla kwesistimu yomzimba womuntu;
Izicubu zinciphisa isikhanyiso somsele;
I-Diverticulum yelungu (ukuvinjelwa kwesisu, okwenza kube nokudla kokudla);
Ukuthatha imithi enobudlova;
I-Chemotherapy, i-irradiation yesifuba;
Ukulimala okukhulu, ukushisa, ukulimala okukhulu ezingxenyeni ezibalulekile.
Ngokuvamile lesi sifo senziwa ngenxa yokubonakaliswa kwangaphandle nangaphakathi kungahle kubekwe njengesilonda sesisindo. Izimpawu zesifo, njengombuso, zingabonakali:
Isihlungu se-syndrome esifubeni, sanda ngesikhathi sokudla noma ngemva kokudla;
Izinzwa ezingathandeki uma zigwinya;
Ukuphuza ukushisa, ukubamba;
Isifo esivamile se-digestive system manje sesilonda sesifo, ukwelashwa okuphathwa yi-gastroenterologist. Isiqondiso kuso ngokuvamile sihlinzekwa ngu-therapist. Isazi senza ukuxilongwa kwesimo sezinyo zomzimba, sihlaziya izimpawu futhi sikhombisa indlela efanele yokwelapha, eqondiswa, njengomthetho, ekuqedeni imfundo yesilonda.
Izinhlobonhlobo zezilonda zesilonda
Isigaba esivamile kakhulu sibheka izinhlobo ezimbili zezifo - eziphawulekayo neqiniso (peptic). Esikhathini sokuqala, uhlobo lwesilonda luxhomeke kwizimbangela ezibangelwa ukugula. Ngakho, umehluko wezinhlobo zokwelapha, ukwesaba, ezinomsoco kanye nezomuthi.
Ngokuvamile, umonakalo kwenzeka lapho kutholakala izinto ezinonya - imithi eminingi igxeka izindonga zesifo, okuholela ekuvukeni. Ngemithwalo ejulile yomzwelo kanye nokushaqeka, kwenzeka ukuthi izilonda zokucindezeleka zenzeke, futhi ukubunjwa kwezimo ezinamandla kuyisici lapho isilwane sinyanyiswa ama-neoplasms anesisu. Izinhlobo ze-decubital zibhekwa ezigulini ezithola izakhi ngomshini ongabonakalisa i-mucosa.
Ngenxa yalolu hlobo lokuphambuka, kubalulekile ukuthi isilonda sesisu sikhombisa kanjani (izibonakaliso), futhi siphathwa ngqo ngokubonakaliswa kwemitholampilo.
Uhlobo lwangempela lwesilonda luhilela ukuhlukaniswa kwesifo ngesikhathi sokuguquka kwamagciwane kungaba nzima futhi kungapheli. Ngokwezinhlobo zokuqala, inkambo yesifo ngokuhlanza acidic isici. Ifomu eliyingozi kunazo zonke litholakala ngemuva kokuhlinzwa. Izilonda ezingapheli zivela esimweni sokuvezwa isikhathi eside ezindongeni zesigcawu sezingxube zesisu esiswini, esilimaza i-mucosa. Ngokuvamile, ukutholakala kwezilonda ze-peptic kungenxa yomphumela omubi we-hydrochloric acid engxenyeni.
Ukuxilongwa njalo kuqala ngokuhlolisisa okwenzekayo ngesifo esinjalo, njengesilonda sesifo, izimpawu, kanye nokwelashwa kuthuthukiswa ngokuhambisana nesithombe somtholampilo. I-anamnesis yalesi sifo iyalungiswa, ngesikhathi lapho iziguli zokudla kanye nendlela yokuphila zihlaziywa ngayo. Ngaphezu kwalokho, udokotela unquma ukutholakala noma ukungabikho kwezibonakaliso ezifanayo ezihlotsheni zesiguli, uhlola isikhumba sakhe ngezinsalela, izindawo nama-neoplasms futhi ucabange ukubunjwa kwamafutha omzimba. Ngokuvamile ukuqedela isithombe somtholampilo, amasampuli egazi (ukuxilongwa kwe-anemia ne leukocytosis), izixuku ze-fecal (ukukhipha ukungena kwegazi) ziyahlolwa.
Ukutholakala kwamasilonda kwendawo kunqunywe nge-instrumentally. Ukusebenzisa i-probe, i-pH ye-mucosa iyalinganiswa. I-endoscope iyakhipha isicu esincane sezinyosi ezivela kudokotela ukuze inqume ukuthi kukhona u-Helicobacter pylori. Uma kunesidingo, ukuhlolwa kwe-ultrasound kwesigxobo, i-X-ray kanye ne-tomography ehlanganisiwe kunikezwa ngaphezu kwalokho.
Ezingeni zokuqala zesifo, njengomthetho, ukwelashwa okunamandla akudingeki - kuyokwanela ukunciphisa ukusetshenziswa kokudla okucasulayo, hhayi ukubhekana nemithwalo esindayo nokuyeka izingubo eziyinkimbinkimbi kakhulu. Ngeke kube yinto engafanele ukuphathwa ngamakhambi abantu. Kunconywa futhi ukuba ugweme ukulala ngokushesha ngemva kokudla, futhi ukulala ebusuku kungcono ngebhodi eliphakeme eliphakeme. Ngesikhathi sokwelapha, ukusebenza ngokomzimba okubandakanya ukuthambekela okude kufanele kugwenywe.
Lo mphumela usebenza uma kunesilonda esincane, sesilonda samanje sesisindo. Ukwelashwa kwamafomu okunzima kunokwenziwa ngezindlela ezimbili - imithi nokuhlinzwa.
Ngokuvamile ekwelashweni kwasetshenziswa izidakamizwa ezine-antibacterial, antiacid and astringent effect. Kuzophinde kudinga izidakamizwa ezisheshisa ukuvuselelwa kwezindawo ezithintekile, futhi ezimweni ezimbi kakhulu, ama-analgesics ngeke abe angenakuqhathaniswa.
Umgomo oyinhloko wokwelashwa kwezidakamizwa ukunciphisa ubuhlungu be-syndrome, i-acidity ye-gastric juice kanye nokucasula kwe-mucosa, lapho isilonda sesisu sakhiwa khona. Izimpawu kanye nokwelapha zihlobene, ngoba ukunyamalala kwemiboniso emibi kubonisa ukuthuthukiswa kwesithombeni sekliniki.
Indima ebalulekile idlalwe izidakamizwa ezishesha ukuphulukiswa kwezilonda. Njengengxenye yamalungiselelo anjalo kukhona ukuvuselela okuvuselelayo, okubuyisela isakhiwo esifanele. Ama-antacids adingeka ukuthi anciphise umphumela wokufutheka kwe-hydrochloric acid ekugxilweni kwe-neutralization, futhi i-prokinetics ibuyisela ngokuphumelelayo i-peristalsis yepheshana lesisu.
Ukusebenza ekwelapheni izilonda ze-peptic kwenziwa uma ukwelashwa okulondolozayo kungasebenzi. Ukwelashwa kuyadingeka uma i-sphincter yesisu ingavaliwe. Ngokuyinhloko, ukungenelela kuyadingeka ukuze kuvinjelwe izinkinga ngendlela yokwakheka kwe- hernia. I-Fundoplication ye-esophagus yenziwa - isisu simisiwe kusukela kumcibisholo futhi sinamathele edongeni lomzimba. Lokhu kuyadingeka ukubuyisela i-angle efanele phakathi kwezitho - kule ndawo, ingozi ye-hydrochloric acid ephonswa kwi-mucosa ye-canal incishisiwe. Ngokuvamile, ukusebenza kuhlangene ne-proximal ye-vagotomy ngokukhetha indlela yeNissen, ehlanganisa ukuhlukaniswa kwamagqabha e-vagal anezinkinga zokuhlukaniswa kwe-gastric hydrochloride.
Yidla ngesilonda se-esophagus
Ingxenye ebalulekile yokwelashwa kuzo zonke izigaba ukunamathela kokudla okulungile. Ukudla okwakhiwe kahle kungasiza ukunciphisa ubuhlungu nokusheshisa. Ngakho, ngaphansi kokuvinjelwa kukhona ukudla okuphazamisa ukuvinjelwa kwejusi lomzimba, kuyenyuka. Kumele kukhishwe ukudla okunamafutha okuthosiwe, isinkwa esisha, iziphuzo ezidakayo nezidakamizwa, amakhowe. Ngesikhathi sokwelashwa kuyinto efiselekayo ukushintsha ngokuphelele ekubilisiwe futhi kuphekwe ukudla okubili kabili. Ungafaka ekudleni kokudla okomuthi nge-zero fat content, amaqanda, okusanhlamvu kanye nenyama ngaphandle kocingo lwe-lipid.
Kubalulekile ukuthobela umbuso wokuphuza: isiguli esinesilonda sesisindo sikhombisa ukuphakama kwamanzi - hhayi ngaphansi kuka-1.5 amalitha ngosuku.
Ukwelashwa kwabantu ngezilonda zesisu
Kunezindlela eziningi zokuvimbela nokwelapha izilonda zesifo ngezindlela ezingavumelani. Ezimweni eziningi, lolu hlobo lwezokwelapha luphephile, ngoba lwakhiwe ekusebenziseni amakhambi okwelapha njengamalungiselelo. Kodwa, naphezu kwalokhu, ukusetshenziswa kwesidakamizwa semithi ehlukile kudinga imvume kadokotela.
Amakhambi omuntu athandwa kakhulu ngezilonda ze-oesophageal amelwa izindlela zokupheka nezifo:
Ilungiselela ingxube ye-peppermint, i-flax kanye ne-fennel, ethathwa ngokulinganisela okulinganayo. Ukubunjwa kuthululwa engilazi yamanzi abilayo futhi kufakwe imizuzu engama-30. Umhluzi uthathwa kabili ngosuku esibukweni.
Amazambane amaningi ahlutshiwe abilisiwe engxenyeni yamitha, khona-ke isixazululo sihlangana. Phuza kufanele kube isigamu sehora ngaphambi kokudla 150 ml ngesikhathi. Ungasebenzisa uketshezi emva kokuvusa - uzoba neglasi elilodwa ngaphambi kokudla kwasekuseni.
Amaqanda enkukhu nobusi abasha ahlanganiswe isilinganiso se-1: 2. Umzuzu omuhle wokwamukelwa - esithombeni esingenalutho ekuseni, isikhathi sokwelapha - izinsuku ezingu-14.
Ngaphambi kokudla kwasekuseni ungaphuza ingilazi yamanzi futhi ngezikhathi ezithile uhhafu wehora uthathe i-spoonful uju nebhotela. Thatha umuthi izinsuku ezingu-10, bese ulandela ukuphumula kwesikhathi esifanayo, futhi inkambo iphinda iphindwe.
Ihora elilodwa ngaphambi kokudla nesilonda, sebenzisa iklabishi noma ijusi yamazambane - 200 no-75ml ngokulandelana. Inkambo yokwelapha inyanga.
I-propolis (40 g) yengezwa ku-500 ml wamafutha omnqumo futhi ishuthukiswe emanzini okugeza ngamaminithi amahora. Ingxube ithathwa ngesisu esingenalutho efomeni elifudumele ku isipuni.
Amapuni amabili we-cherry amagatsha athululelwa ngama-290 g wamanzi abilayo futhi agxila e-thermos okungenani amahora angu-8-10. Umhluzi udliwa izinsuku ezingu-60 kathathu ngosuku imizuzu engu-20 ngaphambi kokudla. Isilinganiso esisodwa - 60 ml.
I isipuni senkinga, esilungiswa esilinganisweni esilinganayo sage and plantain, sithelwa nge 240 ml amanzi futhi sishiswe ngendwangu enombala yamahora angu-2.5-3. Eminyakeni eyishumi yokuqala, umhluzi uthathwa isigamu sendebe ngaphambi kokudla kwasekuseni, kuze kube sekupheleni kwenkathi yanyanga zonke, inani lokudla kwansuku zonke lihamba kathathu.
I-spoon egcwele ye-planta eyomile ifakwe ebhodleleni le-thermos nge-200 ml yamanzi abilayo futhi ifakwe amahora angu-8-10. Umuthi uthathwa kathathu ngosuku ngehora lehora ngaphambi kokudla.
Ukwelapha okunjalo kutholakala kalula nezifo ezihlukahlukene zamathumbu, kuhlanganise ne-ulcer of the esophagus. Ukwelashwa ngamakhambi omuntu kunika amandla okubuyiselwa nokubuyisa okubonakalayo.
Izinkinga zesifundo sesifo
Uma ukwelashwa okungenakufunda noma okungafundile, izinkinga zesifo kungenzeka. Ukubonakaliswa okuyinhloko kwalezi zimo ze-pathological is a bleeding ulcer, ukunciphisa umsele we-esophagus and perforation, nokulahlekelwa kwesisindo somzimba. Ngaphezu kwalokho, indawo yokuvuna ingakhula futhi ishukuthele ezithombeni eziseduze, ibangele ukunqotshwa. Yingakho kungcono ukungabambezeli ngezokwelapha bese uthintana nodokotela ngokushesha uma unesifo sengqondo esincane. Kukhona nolwazi lwezincwadi mayelana nokonakala kwesilonda esingelashwa emathunjini omdlavuza.
Ukuvimbela ukuvela kwesilonda, kuyadingeka ukuthi ungabandakanyi ithonya lezinto ezimbi kusengaphambili: kuyisifiso sokuyeka ukubhema, ukunciphisa umthwalo omubi ohlelweni lwezinzwa, futhi uhlale uhlolwa ngezikhathi ezihleliwe nodokotela. Ukuze umzimba uqiniseke ngokugcwele, kuyasiza ukugcina ukudla, ukudla isidlo sakusihlwa kungakapheli amahora amathathu ngaphambi kokuphupha, nokugcina impilo enempilo. Ukutholakala kwezinqubo zokuvuvukala ezithombeni ezingomakhelwane nakho kungabangela izilonda ezingasebenzi, ngakho-ke kuyadingeka ukwelapha zonke iziphambano kusengaphambili.
Uma kwenzeka ukuxhumana ngesikhathi esifanele nodokotela nokuhlinzeka ukwelashwa okwanele ukuphulukisa isilonda se-esophagus kulula - ukuphola ngokugcwele kuzoba izinyanga ezimbili kuya kwezintathu. Uma lesi sifo sidlulile esimweni esingapheli, ukuphulukiswa kungathatha iminyaka eminingana.
Ngokuphindaphindiwe abantu abaningi bathola iphutha elinjalo ku-mucosa yegciwane lokugaya, njenge-ulcer of the esophagus. Izimpawu, ukwelashwa (amakhambi abantu, imithi, ukungenelela okuhlinzayo) kuchazwe ngokuningiliziwe ezincwadini zezokwelapha, okukwenza kube lula ukuxilongwa kokuphambuka.
Ngendlela yokwelashwa efanele, i-ulcer ayiyona isifo esiyingozi - ngesikhathi esifushane imisebenzi ye-esophagus iyobuyiselwa ngokugcwele, futhi izimpawu zezimpawu ziyophela. Ukuphumelela ngokuphumelelayo ngendlela engavumelekile yokugula kuyindlela yokwelapha engavumelani ne-phytopreparations, ehloswe ekuphulukiseni isilonda esicasulayo nesicasulayo. Ngezinye izikhathi izindlela zomuntu zihlangene nemithi yokwelapha ngisho nokuhlinzwa.
"Umtholampilo of Medicine Family", laseDnepropetrovsk: izibuyekezo, izithombe, isheduli
Uyini dimmer? Regulator of kagesi amandla umthwalo
Ezihlupha - isifo esithathelwanayo. Izimpawu, ukwelashwa, imiphumela